Mumhanzi uye Ramangwana Remangwana | Martech Zone
Isu hatitaure zvakanyanya nezve indasitiri yemimhanzi pano pane yekushambadzira tekinoroji blog asi yayo, pamwe, mumwe wemienzaniso mikuru yekuchinja maitiro evatengi. Takatama kubva kumimhanzi midhiya kuenda kumimhanzi zvishandiso… uye izvozvi tave kufamba kubva pamidziyo kuenda kudhisheni. Ini ndakanyatsosiya iTunes zvachose uye ikozvino shandisa Spotify nezvese zvinhu. Discovery inoitika kuburikidza nesocial network uye neSpotify redhiyo iyo inosanganisa senge mimhanzi inonaka kundipa mitezo mitsva.
Kune vaimbi, haisisiri chinangwa chekuziya nenzara uye kutamba moyo yavo kune vanhu vazhinji vanogona kukwezva kutariswa kwevatungamiriri vemaindasitiri. Ivo vachiri kutamba moyo yavo kunze, asi ikozvino ndezvekuenda pamberi pevateveri kuburikidza nevezvenhau. Vaka vateereri munharaunda uye vatungamiriri vekurekodha vanotevera Sezvo mimhanzi ichienda nhare, zvakakosha kukudziridza kuvapo kwenhare uye ndizvo zvazviri MobBase zvaita - kugadzira tsika zvinoshandiswa zvinobatsira zvikwata kukura yavo fan base vachigovera mimhanzi kune yavo nhare mbozha.
Iyi infographic kubva kuMobBase inopa kumwe kunzwisisika mukushandurwa kwemimhanzi mamiriro uye gwara rekupona revatambi kuti vazvizive.
Tags: mobbaseMobile Anwendungmumhanzimumhanzimumhanzi indasitirimumhanzi nharembozhaspotify
Yemagariro CRM Inopa Kubatanidzwa uye Kukura